भ्रष्टाचारविरुद्धको पशुपति शर्मा गीत बन्द गरिनु दुर्भाग्यः नवीन्द्रराज जोशी « News24 : Premium News Channel
काठमाडौ, ५ फागुन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध लोक गायक पशुपति शर्माले गीत बाहिर ल्याउँदा सरकारले बन्द गराएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलाई त अहिले पञ्चायतकालीन शासनजस्तो झझल्को लागेको छ । सरकारले नागरिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्नुपर्छ ।’
जोशीले वर्तमान सरकार अनुदारवादी र अलोकतान्त्रिक बनेको आरोप पनि लगाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले भिसीलाई विमानस्थलबाट उठाएर ल्याई बालुवाटारमा किन राखियो ? मलाई प्रश्न सोध्न मन लागेको छ । अहिले सरकारले नागरिक स्वतन्त्रताको खिल्ली उडाएको छ ।’
सरकार अहिले लोकतान्त्रिक पद्धति र संविधान विपरित चलिरहेको पनि उहाँको आरोप छ । उहाँको भनाइ छ,‘भ्रष्टाचारको विरुद्धमा गीत लेख्दा गीत नै बन्द भयो । यो सरकारको गलत कदम हो ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको रोष्ट्रममा पेश गरेको तथ्यांक नै मिथ्यांक रहेको जोशीको आरोप छ । उहाँले भन्नुभयो,‘तथ्यांकलाई प्ले गर्न सकिन्छ, तर प्रधानमन्त्रीले तथ्यांक नभईकन मिथ्यांक पेश गर्नुभयो । उहाँले तथ्यांक दिने निकायहरुलाई मिथ्यांक दिन प्रेरित गर्नुभएको होला ।’
जोशीले देशको सबै आर्थिक सूचांकहरु नकारात्मक रहेको दृष्टान्त पेश गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘अहिले व्यापार घाटा बढेको छ । महँगी बढेको छ । विदेशी लगानी घटेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले हिजोको भन्दा आज धेरै प्रगति भयो भन्नुभएको छ । म भन्छु, हिजोभन्दा आज प्रगति भएकै हो तर, त्यो भ्रष्टाचारको प्रगति हो । हिजो करोडको भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, अहिले अरबौंको भ्रष्टाचार भएको छ ।’
सुन काण्ड, वाईबडी काण्डलगायत भ्रष्टाचार काण्डमा दोषीलाई कारबाही नभएकोमा उनले सरकारविरुद्ध आक्रोश पोख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘सुन काण्डमा सरकारले किन परिणाम ल्याउन सकेन ? प्रधानमन्त्रीले डा. गोविन्द केसीको विषयमा संसदीय सर्वोच्चताको खिल्ली उडाउनुभयो ।’
सरकारले हरेक कुरामा तामझाम देखाएको तर परिणाम केहीमा पनि दिन नसकेको आरोप लगाउनु भयो । जोशीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त पाठकको भ्रष्टाचारको विषयमा सरकारलाई चार महिना अघि नै जानकारी रहेको भन्ने कुरा बाहिर आएको सुनाउँदै यतिका दिनसम्म पनि किन कारबाही गरिएन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।